Miatrika fanadihadiana noho ny sarimihetsika fohy mampiseho ny herisetra nataon’ny polisy ireo mpanakanto sy mpikatroka Maleziana · Global Voices teny Malagasy
"Anaovy famotorana ny herisetra fa tsy ny mpitondra hafatra"
Voadika ny 19 Jolay 2021 4:24 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, Español, عربي, English
Seho iray mampiseho fampijaliana tao amin'ny sarimiaina «Vovo-tsakay sy Fanapohana loko». Sary: YouTube
Nanatontosa ny fandefasana voalohany ny “Chilli powder and Thinner”(Vovo-tsakay sy ny Fanapohana loko) maharitra efatra minitra tamin'ny 12 Jona ny tambajotra Freedom Film Network (FFN), izay misy fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny zazalahy 16 taona niaraka tamin'ny olona roa hafa, izay voalaza fa voasambotra sy nodarohan'ny polisy. Ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona dia miangavy ny manampahefana Maleziana hanadihady ny fiampangana fampijaliana ataon'ny polisy fa tsy hanorisory ireo artista sy mpikatroka namorona ny sarimihetsika. Miangavy ny manampahefana Maleziana hanadihady momba ny fiampangana tamin'ny fampijaliana nataon'ny polisy ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa tsy hanao fandrahonana ireo mpanakanto sy mpikatroka namorona ilay filma.
Manondro ny fomba fampijaliana natao tamin'ilay zazalahy ny lohateny dia ny fanasiana vovo-tsakay sy fanapohana loko tamin'ny hoditra.
Tamin'ny 2 Jolay, nanadihady ilay mpanatontosa sarimihetsika FFN, Anna Har sy ilay mpanao sariitatra Amin Landak momba ilay sarimiaina ny polisy. Nanaovan'ny polisy bemidina ihany koa ny biraon'ny FFN sy ny tranon'i Landak. Natao fanadihadiana araka ny andininy faha 500 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny fanalam-baraka, Andininy faha 505 (b) amin'ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny fanambarana izay mety hiteraka fanairana sy fikorontanana ho an'ny besinimaro, ary ny Fizarana faha 233 (1) (a) amin'ny lalàna mifehy ny serasera sy haino aman-jery izy ireo noho ny fampiasana ny fitaovan'ny tambajotra tsy araka ny tokony ho izy.
Ny vokatry ny fanaovana fanadihadiana momba ny herisetra ataon'ny polisy ao Malezia. Tafihan'ny mpitandro ny filaminana ny biraonao sy ny tranonao ary anaovana famotorana araka ny lalàna henjana ianao.
Atsaharo ity fandrahonana ity! Manafika ny biraon'ny @freedomfilmfest any Petaling Jaya sy ny tranon'ilay mpanao sarimiaina Amin Landak ny polisy androany.
Misy ifandraisany tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo an'i Anna Har ao amin'ny FFN sy Amin momba ny famoahana ilay sarimiaina “Vovo-tsakay sy Fanapohana loko” ny fanafihana.
Nomelohin'ny vondrona fiarahamonim-pirenena maro ny fihetsiky ny polisy. Saingy tsy nanakana ny polisy hampiantso ireo mpikatroka miisa efatra avy ao amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Suara Rakyat Malaysia (Suaram) sy ny fiaraha-mientan'ny mpikatroka Maleziana MISI: Solidariti izany tamin'ny 6 Jolay mifandraika tamin'ilay sarimiaina fohy io.
Miditra izy ireo amin'izao fotoana izao
Namoaka fanambarana mihantsy ny Freedom Film Fest taorian'ny bemidina nataon'ny polisy:
Hadihadio ny fiampangana momba ny fampijaliana sy ny fahafatesana any am-ponja: Fa tsy ireo olona izay maneho ny heviny!
Natao hampanginana ny feontsika sy hanodinana ny tsindry ataon'ny vahoaka amin'ny tranga misy amin'ny fahafatesana any am-ponja tao anatin'ny volana vitsivitsy ireo fandrahonana atao amin'ny mpikatroka mafàna fo, mpanao gazety ary mpanakanto amin'izao fotoana.
Tao anatin'io fanambarana io, nitanisa ny fitakiana ny fanavaozana ny rafitry ny polisy ny FNC, ao anatin'izany ny fananganana vaomiera tsy miankina misahana ny fitoriana noho ny fitondran-tena tsy mendrika ataon'ny polisy (IPCMC).
Nandritra izay 18 taona lasa izay, nilaza tantara zon'olombelona izahay, mampiseho ny tsy rariny atrehin'ny olon-tsotra mba hitondrana fanovana. (Vao maika) nandrisika anay ny fanadihadiana sy ny bemidina natao tamin'ny sarimiaina «Vovo-tsakay sy fanapohana loko».
Nilaza i Har tamin'ny antsafa nifanaovana taminy fa tsy ny fandrahonana ny mpanakanto no vahaolana mety ataon'ny manampahefana rehefa miatrika fiampangana amin'ny fanararaotam-pahefana izy ireo.
Ny tena mety indrindra ataon'ny polisy dia ny … manadihady io raharaha io mihitsy ary mamantatra raha tena nisy izany. Ary mandray andraikitra raha nisy izany, avy eo lazaina amin'ny besinimaro mba hampiorina ny fitokisan'ny besinimaro. Amin'ny fanaovana zavatra toy izao… toa mitovy amin'ny fampitahorana ihany izany.
Nanamafy tao amin'ny fanambarana ny Misi: Solidariti fa tsy nanao fahadisoana ny FFN :
Androany, nohadihadian'ny polisy ny iray amin'ireo mpanorina anay noho ny fanaovany zavatra tokony nataontsika rehetra dia ny fanasongadinana ny tsy rariny. Fikambanana tarihin'ny tanora izahay hiady ho an'ny rariny. Ity no hafatra avy amin'ny fo tianay ampitaina aminareo rehetra.
Nahasarika ny sain'ny iraisampirenena ny raharaha. Nilaza ny fanambarana iray niarahana tamin'ny Foibe ho an'ny Asa Fanaovan-gazety Mahaleotena sy ny mpiara-miasa amin'izy ireo fa maneho taratra ny fanamafisana ny famoretana ny fahalalahana miteny ao Malezia ny fihetsiky ny polisy:
Ny fanadihadiana valifaty atao amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpanakanto ary mpanao gazety noho ny fanasongadinana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona fototra dia mampiseho ny filàna maika ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra ary hiantohana fa ny manampahefanan'ny polisy any Malezia dia tompon'andraikitra amin'izay tranga mampiseho ny fitondrantena tsy mendrika rehetra.
Nanamarika toy izany ihany koa i Zaid Malek ao amin'ny Mpisolovava mitady Fahalalahana tamin'ny fanambarana an-gazety nataony fa nanamafy ny fiampangana hita tao amin'ilay sarimiaina ny bemidina sy ny famotorana nataon'ny polisy:
Ny valiny mavesatra nataon'ny polisy tamin'ny sarimiaina fohy mampiseho ny herisetra ataon'ny polisy tamin'ny fakana am-bavany sy ny bemidina dia manamarika ny olana misy marina ezahin'ilay sarimiaina fohy resahana; fihetsika tsy manara-dalàna ataon'ny polisy mitondra tena ho tsimatimanota.
Rehefa nijery ny horonantsary iray manontolo, dia tsy misy zavatra manamarina ny anton'ny hanaovan'ny polisy famotopotorana.
Vondrona iraisampirenena mpiaro ny zon'olombelona marobe no nandefa taratasy tany amin'ny Minisitry ny Raharaha Anatiny Maleziana Hamzah Zainudin naneho ny ahiahin'izy ireo momba ny fiantraikan'ny fihetsiky ny polisy eo amin'ny fiarahamonina.
Ahian'ny fikambananay ny fanafihana natao tao amin'ny biraony sy ny tranony izay inoanay fa natao handrahonana azy ireo ary natao hampitahorana ireo izay te-hiloa-bava sy hampiharihary ny fanararaotan'ireo manampahefana.
Nangataka fanentanana tamin'ny tambajotra sosialy ireo vondrona manohana ireo mpanakanto sy mpikatroka misedra zava-tsarotra tamin'ny 10 Jolay, mandrisika ny mpisera mba hizara ny fomba fijeriny na ny fanehoan-keviny momba ilay sarimiaina.
Jereo eto ilay sarimiaina “Vovo-tsakay sy Fanapohana loko“: